विवाहपछि नायिका ऋचा शर्मा (तस्वीर सहित)
नायिका ऋचा शर्माले दिपेक्ष्य विक्रम राणासँग विवाह गरेकी छन् । ऋचाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा मार्फत विवाहको तस्विर सेयर गदै यस्तो स्टाटस लेखेकी छिन् । ‘जिन्दगीको अर्को सुनौलो प्रहरमा यहाँहरुको अथाह माया अनि आशिर्वाद सदैब यसरी नै मिलोस् ।’
करिना कपुर रेडियोमा फिर्ता, उनकी सासू पहिलो अतिथी बनिन् (भिडियो सहित)
एजेन्सी, कार्यक्रम ‘ह्वाट वुमन वान्ट’ को दोस्रो संस्करण मार्फत् करिना कपुर रेडियोमा फिर्ता भएकी छिन् । उनकी सासू एवं दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टेगोर यो सिजनको पहिलो अतिथी बनिन् । करिनाले शर्मिलालाई छोरी र बुहारीमा के अन्तर हुन्छ भनेर सोधेपछि शर्मिलाले भनिन्, ‘छोरी ती हुन् जो तपाईंको आँखाको अगाडि हुर्किएकी हुन्छिन् । त्यसकारण तपाईंलाई उसको स्वभावबारे […]
मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालकी अनुष्का श्रेष्ठले अवार्ड जित्न सफल भएकी छन् । श्रेष्ठले गतिलो सफलता हात पार्दै मल्टिमिडिया अवार्ड जितेकी हुन् । मिस नेपाल अुनष्का ‘हेड टु हेड च्यालेन्ज’को दोस्रो चरण पार टप टेनमा पुगेकी छन् । उनले हेड टु हेड च्यालेन्जबाट अन्तिम १० मा पुगेपछि शनिबार हुने फाइनल राउन्डका लागि उनलाई बाटो खुलेको हो […]
अभिनेत्री सिर्जना सुब्बाले गराइन् ‘बेबी बम्प’ फोटोशूट (फोटो फिचर)
आमा बन्न लागेकी अभिनेत्री सिर्जना सुब्बाले हालै गर्भावस्थाको बोल्ड फोटोशूट गराएकी छिन् । गएको मंसिरमा फिल्मकर्मी पदम सुब्बासँग विवाह गरेकी थिइन् । सिर्जनाको बोल्ड फोटोशूटमा बेबी बम्प देख्न सकिन्छ ।
अदिति बुढाथोकीको बोल्ड लुक्स(फोटो फिचर)
नेपाली चलचित्र ‘कृ’ की अभिनेत्री अदिति बुढाथोकीले केहि महिना अगाडी इन्स्टाग्राम मार्फत आफू प्रमेमा परेको जानकारी घुमाउरो शैलीमा दिएकी थिइन् । बुढाथोकी लामो समयदेखि मूम्बईमा छिन् । इन्स्टाग्राममा आफ्नो एउटा तस्विर सार्वजनिक गर्दे अदितिले भारतीय र्यापर अलिम मोरानीसंग प्रेममा रमाई रहेको संकेत गरेकी थिइन् ।
उदिप श्रेष्ठको अंगालोमा आँचल, फोटो शेयर गर्दै आँचलले लेखेकी छन्, ‘मेरो ह्याप्पी प्लेस’
केहि वर्ष अगाडीदेखि आप जोडीको नामवाट परिचित नायिका आँचल शर्मा उदिप श्रेष्ठको अंगालोमा देखिएका छन् । दर्शकहरुले पल शाह र आचलको जोडी धेरै मनपराएका थिए । तर धेरैले आचल र पल प्रेममा छन् भनेका थिए । तर उनीहरुले भने कहिले प्रेममा रहेको कुरा स्वीकारेका थिएनन् । तर पछिल्लो समय आचल उदिप श्रेष्ठसँग प्रेममा रहेको कुरा […]
एजेन्सी, भारतीय कमेडियन कपिल शर्माकी पत्नी गिन्नी चतरथले छोरी जन्माएकी छन् । गतवर्ष डिसेम्बरमा बिहे गरेका शर्माले ट्वीटरमा मार्फत शेयर गरेका छन् । कपिल बाबु बनेपछि उनका फ्यान र कैयन् सेलिब्रेटीले बधाई दिएका छन् ।
टु हेड च्यालेञ्ज जित्दै अनुष्का श्रेष्ठ पुगिन् मिस वर्ल्डको उत्कृष्ट ४० मा
अनुष्का श्रेष्ठले हेड टु हेड च्यालेञ्ज जित्दै मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ४० मा पुगेकी छिन् । १२४ देशका सुन्दरीहरुबीच डिसेम्बर १४ मा लण्डनमा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुँदैछ । दुई चरणमा हुने हेड टु हेड प्रतियोगिताअन्तर्गत अनुष्काले पहिलो चरणमा इन्डोनेसियाकी सुन्दरी र दोस्रो चरणमा मेक्सिकोकी सुन्दरीलाई पछि पारेकी थिइन् ।मल्टिमिडिया अवार्डमा अनुष्का उत्कृष्ट ३ मा छिन् […]
नेपाल आइडल सिजन–३ पुस ३ गतेबाट
मंसिर २४, काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन–३ पुस ३ गतेबाट प्रशारण हुने प्रशारण हुने भएको छ । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने रियालिटी सो नेपाल आइडल सिजन–३ को अडिसन राउन्डका सबै श्रृंखला छायांकन भइसकेका छन् । यो वर्ष रिमा विश्वकर्माको ठाउँकम अरुले नै कार्यक्रम सञ्जालन गर्नेछन् ।
दीपिका पादुकोणको मुख्य अभिनय रहेको फिल्म ‘छपाक’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो सहित)
एजेन्सी, फिल्म ‘छपाक’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको मुख्य अभिनय रहेको यस फिल्म एसिड अट्याक सर्वाइभर लक्ष्मी अग्रवालको जीवनमाथि बनेको छ । फिल्ममा दीपिकाले मालती नामकी एक साधारण युवतीको भूमिकामा निर्वाह गरेकी छन् ।फिल्म जनवरी १० मा रिलिज हुनेछ । हेर्नुहोस् भिडियो
यस कारण ट्रोलको शिकार बनिन् नायिका जोइ किंग
एजेन्सी, हलिउडकी चर्चित हट नायिका जोइ किंगले नया तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेसँगै ट्रोलको शिकार बनेकी छिन् । कालो ड्रेसमा बसेकी उनको तस्बिरलाई धेरैले ट्रोल बनाएका छन् । तस्बिरमा उनले शौचालय जाँदाको पोज दिएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
बोल्ड अवतारमा बुद्धी तामाङसँग रोमान्स गर्दै परमिता राज्यलक्ष्मी
काठमाडौं । फिल्म ‘दि कर्मा’को अफिसियल टीजर सार्वजनिक भएको छ । आउदो १७ माघबाट देशभर रिलिजको तयारीमा रहेको फिल्मको टीजरमा अभिनेत्रीद्वय परमिता राज्यलक्ष्मी राणा र नीता ढुङ्गाना, करण वर्मा र बुद्धी तामाङले अभिनय गरेका छन् । टिजरमा अभिनेत्री राणा बोल्ड अवतारमा समेत देखिएकी छन् । देवकुमार श्रेष्ठको निर्देशन रहेको फिल्म जय मिडिया म्यानेजमेन्ट र श्रीत […]
अभिनेत्री अदाह शर्माको हट तस्विरहरु
एजेज्न्सी, अभिनेत्री अदाह शर्मा हिन्दी र तेलगु भाषाका चलचित्रमा काम गर्ने गर्छिन् । शर्माले सन् २००० मा हिन्दी कथानक चलचित्र १९२०बाट चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी थिइन् । उनि जिम्न्यास्टिककी खेलाडी समेत हुन् । हेर्नुहोस् तस्विरहरु
जोजिबीनी तुन्जी बनिन् २०१९ को मिस युनिभर्स
एजेन्सी, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको फिनालेमा ब्रह्माण्ड सुन्दरी (मिस युनिभर्स)को ताज दक्षिण अफ्रिकी २६ वर्षीया जोजिबीनी तुन्जीले जितेकी छिन् । एटलान्टामा आइतबार सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा महिला सशक्तीकरणलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर दिइएको प्रस्तुतिका आधारमा तुन्जीले मिस युनिभर्सको ताज जितेकी छन् । पुएर्टो रिको र मेक्सिकोका सुन्दरी पनि फाइनलमा पुगेका थिए ।
ऋचा शर्माले विवाहको फोटो सेयर गर्दै भनिन् , ‘यहाँहरुको अथाह माया अनि आशिर्वाद सदैब यसरी नै मिलोस्’
२३ मंसिर, काठमाडौँ । नायिका ऋचा शर्माले दिपेक्ष्य विक्रम राणासँग विवाह गरेकी छन् । शनिबार उनीहरुले लामो समयको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन् । ऋचाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा मार्फत विवाहको तस्विर सेयर गदै यस्तो स्टाटस लेखेकी छिन् । ‘जिन्दगीको अर्को सुनौलो प्रहरमा यहाँहरुको अथाह माया अनि आशिर्वाद सदैब यसरी नै मिलोस् ।’
मोडल काइली जेनरकी फलोअरस कति ?
एजेन्सी,मोडल काइली जेनरका २७ करोड फलोअर पुगेका छन् । ग्ल्यामरको क्षेत्रमा जेनर चर्चित छिन् । उनकी बहिनी केन्डल पनि यही क्षेत्रमा छिन् । अर्बपति काइलीको सेक्सी र बिकिनी भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल छ । उनले आफ्नो कम्पनीको सेयर चार हजार तीन सय २० करोडमा बेचेकी हुन् । यो कम्पनीमा अब धेरै चुनिएका कम्पनी जोडिने भएका […]
बलिउड नायिका उर्वशी रौतेलाको बोल्ड लुक्स
एजेन्सी, मुम्बईमा आयोजित फिल्मफेयर ग्ल्यामर एंड स्टाइलु अवार्डमा फरक स्टाइल र फेसनमा दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, करिश्मा कपूर, बिक्की कौशल, शिल्पा सेट्टी र उर्वशी रौतेला आदि सहभागी भएका थिए । उक्त कार्यक्रममा स्टाइल, फेसन र आउटफिटको लागि अवार्ड दिइएको थियो ।
रोशन बालुवाको “नि बरी लै” सार्बजनिक (भिडियो सहित)
२० मंसिर, काठमाडौं । नेपाली संगीत क्षेत्रमा दिनदिनै गीतहरु बजारमा आइरहेको छ । पछिल्लो समयमा झनै गायकहरु बढी भएपछि गीतहरु ल्याइरहेका छन् । भर्खरै मात्र रोशन बालुवाको शब्द, संगीत र एरेन्जमा रहेको “नि बरी लै” गीतको भिडियो सार्बजनिक भएको छ । अनुष्का मानन्धरको स्वरमा रहेको यस गीतमा अनुष्का मानन्धर र सजीत ठाकुरले अभिनय भएका छन् […]
प्रहरी चौकी धाउँदै वाणी कपुर
एजेन्सी, बलिउड एक्ट्रेस वाणी कपुरले धर्मबारे ख्याल नगरी तस्बिर खिचाउँदा र बोलेको विषयमा प्रहरीमा निवेदन परेपछि अहिले उनी प्रहरी चौकी धाइरहेकी छन् । उनले अघिल्लो साता ‘हरे राम’ लेखेको कपडाको ब्रा लगाएर खिचेको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तस्बिरले धार्मिक भावनामा चोट पुगेको भन्दै मुम्बई पुलिसमा उजुरी परेपछि वाणी कपुर प्रहरी चौकी धाइरहेकी छन् ।
अभिनेत्री बिनिता बरालको ‘सरप्राइज’
एजेन्सी, अभिनेत्री बिनिता बरालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफू गर्भवती भएको जानकारी दिएकी छिन् । करिब ४ महिनाअघि अमेरिकामै विवाह गरेकी अभिनेत्री बिनिताले आफू गर्भवती भएको बताएकी हुन् । बिनिताले फेसबुक अकाउन्टमार्फत् ‘सरप्राइज, सरप्राइज’ भन्दै यसबारे बताएकी हुन् । उनले दुईवटा फोटो सेयर गर्दै लेखेकी छिन्, ‘सरप्राइज सरप्राइज !! ‘सानी बिनिता’ अन बोर्ड !!’ बिनिताले तिलक […]